မန္တလေးပဋိပက္ခကို နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူများက မီးထိုးပေးခဲ့ဟုဆို | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒူချီရာတန်အကြမ်းဖက်မှုအတွင်း အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုအတွက် စစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသော်လည်း ပျောက်ဆုံးရဲတပ်ကြပ်ကြီးအမှုဖြင့် ရိုဟင်ဂျာ ၇ ဦးကို ထောင်ဒဏ် ၁၈ နှစ်စီချမှတ်
ဘီဘီစီအင်တာဗျူးမှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန် သရုပ်အမှန် ပေါ်လွင်လာသည် »
မန္တလေးပဋိပက္ခကို နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူများက မီးထိုးပေးခဲ့ဟုဆို
မန္တလေးပဋိပက္ခကို နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူများက မီးထိုးပေးခဲ့ဟုဆို Written by မဇ္ဈိမ
“မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားသည့် အကြမ်းဖက်မှုများနောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်လက်များ၊ မန္တလေးအဓိကရုဏ်း” အစီရင်ခံစာကို Justice Trust ဆိုသည့် အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်သည်။ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်သည့် အဓိကရုဏ်းကို အယောင်ဆောင်လူအုပ်စု အကြမ်းဖက်မှုအောက်တွင် လက်နက်များဖြင့် လူများက ကျုးလွနခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ အင်န်ဂျီအိုက မတ် ၂၃ရက်တွင် ဘန်ကောက်မြို့၌ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်မှုကို သတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့သည်။
“အစီရင်ခံစာမှာ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေက ကြာရှည်မြင့်သိကြတယ်။ အာဏာလက်ဆုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ မွတ်စလင်တွေကြားက ဘာသာရေးအမုန်းတရားကို နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခဲ့ကြတာပဲ။”ဟု အင်န်ဂျီအိုအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သည့် မန္တလေးမှ ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသိန်းသန်းဦးက ပြောသည်။ “ကျွန်တော်တို့တွေ ဒီလိုလုပ်ရပ်မျိုးတွေကို အရင်က ကြုံခဲ့ဖူးတာပဲ။ အရပ်ဝတ်စွမ်းအားရှင်ခေါ်တဲ့အဖွဲ့တွေက နိုင်ငံရေးအကြမ်းဖက်မှုတွေမှာ ယူနီဖောင်းဝတ်စစ်သားတွေထက်ပိုပြီး သုံးနေကြတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ အမှန်လိုအပ်နေတဲ့ အရှိတရားတွေကို ပြည်သူတွေအာရုံလွဲနေစေဖို့အတွက် ဓားစာခံလူနည်းစုတွေကို စတေးနေတာပဲ ဖြစ်တယ်။”ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမှ ရှေ့နေရှေ့ရပ်များဖြင့် ခြောက်လအချိန်ယူကာ သုတေသနလုပ်ခဲ့သည့် ယင်းအစီရင်ခံစာတွင် နိုင်ငံအတွင်းနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူမျိုးရေးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည့် ၂၀၁၄ခုနှစ် ဇူလိုင်လက မန္တလေးကို ခြောက်ခြားသွားစေသည့် အဓိကရုဏ်းများကို အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ထားသည်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်သည် ယခင်စစ်အစိုးရလက်အောက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် လူမှုရေးပဋိပက္ခနှင့် အလားသဏ္ဍန်တူသောနောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်လည်းဖြစ်သည်။
မန္တလေးအဓိကရုဏ်းသည်လည်း ယခင်ဖြစ်စဉ်များနှင့် မနီးယိုးစွပ်တူညီသည်။ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ကတစ်ဆင့် လိမ်လည်တိုင်ကြားသည့် မုဒိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကစတင်ကာ မီးစပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ယခင်အဓိကရုဏ်များနှင့် ခြားနားသွားခဲ့သည်က ဒေါသထွက်နေသည့်လူအုပ်ကြီးက ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရအောင် ဆူပူနေသော်လည်း မန္တလေးမြို့ခံပြည်သူများက ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲ အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်လိုက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်အားဖြင့် ဒေသခံဘုန်ကြီးများ၊ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် ဂျာနယ်လစ်များ ရောက်ရှိလာပြီး အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ပြင်ပမှ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်သူများ၏ လုပ်ရပ်ကို ပြည်သူတို့က သိရှိပြီး အပျက်အစီးနည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“မန္တလေးဖြစ်စဉ်ကနေ မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ နိုင်ငံရေးဗျူဟာကစားပြီး ဖန်တီးခံရတယ်ဆိုတာ သေချာရှင်းလင်းသွားစေတယ်။ ဒေသခံတွေရဲ့ နိုင်ငံရေးအရသွေးထိုးမှုကို အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။”ဟု အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြသည်။
မန္တလေးအကြမ်းဖက်မှုကို ဆိုင်ကယ်စီးလူတစ်စုက မွတ်စလင်အိမ်နီးချင်းများကို ဒေါသဆွပေး၍ နှစ်ညတိုင်တိုင် သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြောင်း မျက်မြင်များက ပြောသည်။ ထို့ပြင်မန္တလေးပဋိပက္ခတွင် အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း ဒေါသထွက်နေသည့် လူအုပ်ကြီးနောက်တွင်ပင် ရှိနေကာ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများအတွက် အရေးယူသည့် လုပ်ဆောင်မှုကို ပြုလုပ်ခြင်းမရှိကြောင်းလည်း တွေ့ရသည်ဟု အစီရင်ခံစာက ဆိုသည်။
This entry was posted on March 24, 2015 at 12:04 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.